Mgbanwe eriri na-agbanwe agbanwe
atụmanya nke warara
Maka ụlọ ọrụ ahịa ọkụ ọkụ niile, ọnọdụ mmepe dị ugbu a dị mma, mana asọmpi siri ike. Anyị ozi bụ ime ka ndị kasị mma ngwaahịa, nke mere na ahịa ọrụ tụkwasịrị obi anyị na ngwaahịa. Ihe omimi warara nwere otutu ojiji na oru; oyi ...
Maka ụlọ ọrụ ahịa ọkụ ọkụ niile, ọnọdụ mmepe dị ugbu a dị mma, mana asọmpi siri ike. Anyị ozi bụ ime ka ndị kasị mma ngwaahịa, nke mere na ahịa ọrụ tụkwasịrị obi anyị na ngwaahịa. The warara ìhè nwere a dịgasị iche iche o ...
Ngwa na nhọrọ nke eriri oriọna
A na-ekewa eriri oriọna ahụ n'ime eriri ọkụ nke obere ọkụ na eriri ọkụ. Kedụ maka eriri ọkụ nke eji n’elu? Site na ntinye nke ihe nchapu nke uzo nkpuchi nke uzo ozo, uzo ozo nke di n'okpuru ulo oru, ihe ntinye ohuru na ulo oru na ihe eji achọ ihe, ...
Nhọrọ nhọrọ na ntinye nke eriri ọkụ ọkụ
Mgbe ị na-achọ mma, anyị na-ahụkarị na ọkụ ọkụ na-eduga na ndepụta ịchọ mma, mana ọtụtụ ndị nwe ya amaghị ihe ọ bụ. N'ezie, nke a dịkwa oke nkịtị. Nke mbu, enweghi otutu uzo. Nke abụọ, n'ihi na e zoro belt ahụ, anyị na-ahụ ìhè ya naanị, mana anyị agaghị ahụ onyinyo ya. Na ...
123th Canton Fair mechara gaa nke ọma
Joineonlux lekwasịrị anya na mmepe, mmepụta na ire ahịa eriri LED. O nweela otuto sitere n'aka ndị ahịa si mba ọzọ ma dọtakwa uche zuru ebe niile. Lọ ebe ahụ na-eme mkpọtụ, na-eme mkpọtụ ma na-eme mkpọtụ. Imirikiti ndị ahịa kwuru banyere nkọwa ahụ n'ụlọ ntu ahụ, enwerekwa ohere maka iwe iwe ...
Ihe ngosi 121th Canton Fair mechara gaa nke ọma
Zhongshan Joyeonlux nwere afọ iri na asaa nke ahụmịhe ma na-agbaso ngwa ngwa na teknụzụ kachasị ọhụrụ gbasara ogo ngwaahịa, ọrụ ndị ahịa na imepụta ngwaahịa. Ọ bara uru ịkọwa na anyị na-a attentiona ntị na atụmatụ dị mfe nke nchekwa na mma. Joyeonlux na-enye ndị ahịa ihe dị iche iche ...
Dịka ọmụmaatụ, enwere ike kewaa oriọna dị larịị na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ n'ime ụzọ atọ, yabụ ọkụ ọkụ a na-eme ugbu a, oriọna warara, na oriọna dị larịị.
1. lexgbanwe Ikanam ìhè warara gbakọtara na FPC na SMD Ikanam, nke mere na ndị ọkpụrụkpụ nke ngwaahịa bụ naanị ọkpụrụkpụ nke a mkpụrụ ego, na anaghị ewe ohere; nkọwa zuru ezu gụnyere 18 LEDs na 30cm ogologo, 24 LEDs na 15 LEDs, 24 LEDs na 30 LEDs na 50c ...
Gịnị bụ anya maka echichi nke Ikanam ìhè belt
Rịba ama maka ntinye nke eriri ọkụ ọkụ ọkụ: usoro ntanetị nke eriri ọkụ ọkụ. Igwe ọkụ n'ozuzu nke eriri ọkụ ọkụ ọkụ bụ DC 12V, yabụ achọrọ ike ọkụ ọkụ. Ogo ọkọnọ na-adabere n'ike na ogologo njikọ nke eriri ọkụ ọkụ. Ihe nkedo nke mono ...
Nhọrọ nke eriri ọkụ ọkụ na-adabere na nzube echichi na ọkụ
Ihe dị iche n’etiti eriri eriri akwa na akwa eriri dị ala bụ: eriri akwa akwa batrị n’ozuzu ya bụ mpịakọta 50/100, eriri ọkụ eletrik n’ozuzu ya bụ mpịakọta 5-mita, eriri ọkụ eletrik dị elu anaghị egbochi mmiri, obere voltaji. eriri ọkụ bụ mmiri na-adịghị ma ọ bụ na ọ bụghị, oriọna ...